के मसँग कोरोना उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छ र ? : जालिम मुखिया « News24 : Premium News Channel
के मसँग कोरोना उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छ र ? : जालिम मुखिया
प्रकाशित मिति : Apr 11, 2020
काठमाडौं, २९ चैत । विश्वभर कोरोना भाइरस ९कोभिड १९०को संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिरहेको छ । यसैबीच भारतीय अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालको पर्सा जिल्लामा जालिम मुखियाले ४०र५० जना कोरोना संक्रमितलाई भारत पठाउने षडयन्त्र गरेको भन्ने समाचार विशेष रुपमा प्रसारण गरेका थिए र गरिरहेका छन् पनि ।
त्यस्तै, केही सञ्चार माध्यमले त जालिम मुखियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको भन्ने समाचार पनि सम्प्रेषण गर्न भ्याएका थिए ।
यस विषयमा पर्साका जालिम मुखियाले भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारण भएका समाचारमा कुनै तथ्य नभएको बताएका छन् । उनले भने, “यी सबै कुरामा विरोधाभास छन् । मैले भारतमा कोरोना फैलाइरहेको छु भन्ने समाचार गलत हो । चीनमा भारतले कोरोना फैलायो, अमेरिकामा भारतले कोरोना फैलायो भन्नु जस्तो फटाई कुरा हो, विरोधाभास कुरा हो । यी सबै गलत कुरा हो ।”
उनले थपे, “भारतसँग हाम्रो जुन दोस्ती छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, त्यसलाई खल्बल्याउने तत्व सक्रिय भइरहेको छ । यस्तो महामारीको समयमा जुन कुरा उताको प्रशासनमा पुगेको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । मेरो कोरोना उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री कहाँ छ रु मैले त्यहाँ पठाएको कोरोना संक्रमितहरु कहाँ छन् रु त्यो त उनीहरु पुष्टि गुर्नपथ्र्यो नि ।”
उनले फेरि भने, “मैले त्यहाँको एसएसबीसँग आफै फोन गरेर म जालिम मियाँ हुँ । तपाईसँग कुरा गर्नुछ भने । त्यसपछि उसले फोन काट्यो । पछिबाट फोन लागेन ।”
जालिम मियाँ (मुखिया) हातहतियार कारोबारमा पनि संलग्न छन्, भन्ने विषयमा उनले भने, “यो विषयमा मिडियाहरुले पनि वकालत गरिदिए राम्रो हुन्छ । हाम्रो प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरुमा हतियार सप्लाई गरेको मेरो कहिँ कतै रेकर्डहरु छैन । मैले हतियार सप्लाई गरेको छु भन्ने सावित हुन्छ भने म जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु ।”
दिल्लीमा सम्पन्न भएको जमातमा उपस्थित भएकाहरुलाई संरक्षण दियो भन्ने कुरा पनि गलत भएको उनको दावी छ ।
अर्कोतर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को एउटा चिठ्ठीको आधारमा दिनभरि प्रशारण गरेको जालिम मुखिया बारेको समाचारलाई भारत बिहार राज्यका डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेयले खण्डन गर्दै यसमा कुनै सत्यता नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
यो घटनाले भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नेपाललाई केन्द्र बनाएर अर्थात नेपाललाई जोडेर कुन हदसम्मको झुठो प्रचारबाजी गर्छन भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ । अझ नेपाली मुसलमानहरुलाई पनि पाकिस्तानी ‘मुल्लाह’ ठान्ने उनीहरुको बर्षौदेखिको प्रवृति पुनः एकपटक छर्लङ्ग भएको छ ।
जालिम मुखियासंगको थप कुराकानी भिडियोमा
तारा आचार्य विराटनगर, ३१ जेठ । निशान छाप संसोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको
काठमाडौं, ३१ जेठ । संसदबाट सर्वसम्मत नेपालको नयाँ नक्सा अनुमोदन भएको खुसीयालीमा चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ दहचोकमा